M/weyne Trump oo baajiyey kulan uu la qaadan lahaa hogaamiyaal sare ee Kooxda Taliban… – Hagaag.com
M/weyne Trump oo baajiyey kulan uu la qaadan lahaa hogaamiyaal sare ee Kooxda Taliban…
Posted on 8 Seteembar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in uu baajiyay kulan maanta oo Axad ah la qaadan lahaa Madaxweynaha dalka Afgaanistan Ashraf Ghani iyo hogaamiyaal sar sare oo ka tirsan kooxda Taliban.
Qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay Madaxweynaha dalka Mareykanka ayuu ku sheegay in uu baajiyay kulanka ka dhici lahaa Camp David uu kula balan sanaa Madaxweyne Ghani iyo Hogaamiyaal katirsan Taliban.
Baaqashada kulankan ayaa sabab looga dhigay kadib markii kooxda Taliban sheegatay mas’uuliyada weerar dhawaan ka dhacay magaalada Kabul oo lagu dilay askari Mareykan ah iyo ciidamo kale oo NATO katirsan.
Madaxweyne Donlad Trump ayaa sidoo kale sheegay in uu joojiyay heshiis nabadeed oo uu dalkaasi la galay ururka Taliban, kadib wadahadalo mudo u socday dowlada Mareykanka iyo xubno ka tirsan Taliban.
Mareykanka iyo Taliban ayaa yeeshay wadahadallo sagaal wareeg galay waxaana wadahadaladaasi ka dhaceen dalka Qatar, waxaana ergayga Mareykanka u qaabilsan wadahadalada sheegay in mabda’ ahaan heshiis nabadeed gaareen labada dhinac.
Heshiiska qabyada ah ee la gaaray ayaa waxaa ka mid ah, in Mareykanka uu muddo 20 todobaad gudahii ah uu dalka Afghanistaan kala baxo 5,400 oo askari, waxaana meel marinta heshiiskan ama diidmada iska leh Madaxweyne Donald Trump.